Vamwe Vanoti Ndakanga Ndafa Ndikazomutswa. Ichokwadi Here? | Mibvunzo yeBhaibheri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Korean Kyangonde Latvian Lingala Lithuanian Luganda Malagasy Malay Malayalam Maltese Mutauro Wemasaini wokuAmerica Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Vamwe Vanoti Ndakanga Ndafa Ndikazomutswa. Ichokwadi Here?
Vanhu vakawanda vanotaura izvi vanoti mweya yavo yakanga yaparadzana nenyama kana kuti vaiona chiedza chakajeka kana kuti imwe nzvimbo yakanaka chaizvo. ‘Vamwe vanoti kuona zvinhu izvi chikomborero chisingawanikwi nemunhu wose wose nokuti vakaona imwe nzvimbo inorarama vanhu,’ rinodaro bhuku rinonzi Recollections of Death. Kunyange zvazvo Bhaibheri risingatauri nezvezvinhu izvi zvinonzi zvinoonekwa nevanhu, rine chokwadi chinoratidza kuti zvinoonekwa izvozvo hazviratidzi kuti kune humwe upenyu kana munhu achinge afa.
Vakafa havana chavanoziva.
Bhaibheri rinotaura kuti vakafa “havana kana chavanoziva.” (Muparidzi 9:5) Patinofa hatiendi kune imwe nzvimbo kana kuona zvimwe zvinhu, asi kuti tinenge tisisipo. Dzidziso yokuti mweya haufi haibvi muBhaibheri. (Ezekieri 18:4) Saka zvose zvinotaurwa nevanhu vanoti vakafa vakamuka hazviratidzi zvakaita kudenga, gomba remoto kana kuti humwe upenyu.
Razaro paakamutswa pane zvaakataura here nezvekufa kwake?
Nyaya iri muBhaibheri yaRazaro inotsanangura zvinonyatsoitika munhu paanofa: Akamutswa naJesu pashure pokunge afa kwemazuva mana. (Johani 11:38-44) Kudai Razaro akanga ava kurarama humwe upenyu hwakanaka, hwaizova utsinye kuti Jesu amumutse kuti araramazve pasi pano. Bhaibheri hariratidzi kuti Razaro ane zvaakataura zvine chokuita nehumwe upenyu hwaakanga ava kurarama. Kudai kuri kuti Razaro akararama humwe upenyu pashure pokunge afa angadai akataura. Chinonakidza panyaya iyi ndechokuti Jesu akafananidza rufu rwaRazaro nokurara, kuratidza kuti Razaro paakanga akafa hapana chaaiziva.​—Johani 11:11-14.
Bhaibheri rinotaura nezvevanhu 8 vakamuka kubva kuvakafa. Pane zvavakataura zvaiitika kwavari pavakanga vakafa here?
Bhaibheri Rinotii Nezvedenga?